China umsele Box mveliso kunye nabathengisi | Lianggong
Iibhokisi zomsele zisetyenziswa kumsele wamatye okombiwa njengendlela yokuxhasa umsele wamanzi. Banikezela ngenkqubo yokufaka umsele ongenakufikeleleka ngokulula.
Iibhokisi zomsele zisetyenziswa kumsele wamatye okombiwa njengendlela yokuxhasa umsele wamanzi. Banikezela ngenkqubo yokufaka umsele ongenakufikeleleka ngexabiso eliphantsi. Zisetyenziswa kakhulu kwimisebenzi yomhlaba efana nokufaka imibhobho yesebenzisi apho ukuhamba komhlaba kungabalulekanga.
Ubungakanani benkqubo efunekayo ukuze isetyenziselwe ukuxhasa umsele wakho womhlaba ngokuxhomekeke kubunzulu beemfuno zakho kunye nobungakanani bamacandelo ombhobho owafakayo emhlabeni.
Inkqubo sele isetyenzisiwe kwindawo yomsebenzi. Umsele wamanzi wenziwe ngepaneli engaphantsi kunye nepaneli ephezulu, edityaniswe nezixhobo ezinokuhlengahlengiswa.
Ukuba ukumba kunzulu, kunokwenzeka ukufaka izinto zokuphakama.
Singazilungiselela iinkcukacha ezahlukeneyo zebhokisi yomsele ngokweemfuno zeprojekthi yakho
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo kweeBhokisi zomsele
Iibhokisi zomsele zisetyenziswa ikakhulu xa kusombiwa xa ezinye izisombululo, ezinjengokufumba, zingenakulunga. Kuba imisele ithambekele ekubeni inde kwaye incinci, iibhokisi zemijelo ziyilelwe oku engqondweni kwaye ke zilunge ngakumbi ukuxhasa imijelo engavulwanga kunalo naluphi na olunye uhlobo lwesakhiwo sokumba. Iimfuno zethambeka ziyahluka ngohlobo lomhlaba: umzekelo, umhlaba ozinzileyo unokuthambeka ubuyele kwi-engile yeedigri ezingama-53 ngaphambi kokufuna inkxaso eyongezelelekileyo, ngelixa umhlaba ongazinzanga kakhulu unokuthambeka ubuyele kuma-34 degrees ngaphambi kokuba kufuneke ibhokisi.
Izibonelelo zebhokisi yomsele
Nangona ukuthambeka kuhlala kubonwa njengeyona ndlela inexabiso eliphantsi lokutsala, iibhokisi zomsele ziyasusa iindleko ezininzi ezinxulumene nokususwa komhlaba. Ukongeza, umsele wamanqindi ubonelela ngesixa esikhulu senkxaso eyongezelelweyo ebalulekileyo kukhuseleko lwabasebenzi bamsele. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa okufanelekileyo kubalulekile ekuqinisekiseni ukuba iibhokisi zakho zibonelela ngokhuseleko olufanelekileyo, ke qiniseka ukuba uphando ngeenkcukacha zakho zomsele kunye neemfuno ngaphambi kokuba uqhubeke nokufakwa kwebhokisi.
* Kulula ukudibana kwindawo, ukufakwa kunye nokususwa kuncitshiswe kakhulu
* Iiphaneli zebhokisi kunye nemitya yakhiwe ngonxibelelwano olulula.
* Oku kwenza ukuba kube lula ukwenza uhlengahlengiso kwibhanti enebhanti kunye nebhokisi ukufezekisa ububanzi kunye nobunzulu obufunekayo.
Egqithileyo Umhambi weFomu yeCantilever
Aluminium ibhokisi yokutshiza
ibhokisi yomsele ongasindiyo
umsele wentsimbi ibhokisi
umsele iibhokisi shoring